Maxay tahay sababta looga guurayo caasimadda Jakaarta? – Hornafrik Media Network
Magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia oo ah magaalo xeebeed ayaa sanadihii dambe wajaheyesay khatar aan horay loo arag oo keentay in dadka iyo dowladdaba ay bilaabaan sidii looga guuri lahaa.
Magaaladan oo ah xarunta looga taliyo dalkaas ayaa waxaa ka sare maraya biyaha badda, oo waxaa sare u kacaya heerka biyaha badda ay joogaan, waxaana taas ay keentay in ay dhulka galaan inta badan guryaha caasimadda.
Biyaha badda ayaa noqday kuwa ku fatahay guryaha magaalada, waxayna caqabad ku noqdeen noolasha dadka.
Dhismayaal qadiimi ah oo ku yaala magaaladaas ayay biyaha ka sare mareen, waxaana taas ay keentay in dhismayaasha qaar ay dadka isaga guuraan, maadaama ay adag tahay in lagu noolaado. Sidoo kale misaajido ay dadka ku tukan jireen ayaa la isaga guuray, maadaama ay biyaha badda buux dhaafiyeen.
Dowladda dalkaas ayaa sanadihii dambe waday dedaalo wax looga qabanayo arrintaas, waxayna derbi ka dhistay dhanka badda, si looga gaashaanto biyaha badda ee gudaha usoo galaya magaalada, balse arrintaas waxtar badan ma aysan yeelanin.
Sidoo kale qorsheyaasha ay dejisay dowladda ayaa waxaa kamid ah in caasimadda laga raro Jakarta, loona wareejiyo jasiiradda Borneo oo ku taala meel hawd ah.
“Waxaanu heysanaa fursad wanaagsan oo ah in aan meel hoose wax ka bilawno, in aan hagaajino magaalo aad u wanaagsan oo lagu noolaan karo, waxaana adeegsan doonaan waxwalba oo ugu fiican, magaalana lagu dhisi karo”, ayuu yiri Sofian Sibarani oo ah khabiir magaalooyinka horumarintooda ka shaqeeya.
Haseyeeshee meesha haatan la doonayo in laga yagleelo caasimadda cusub ee Indonesia ayaa waxaa ku nool dad asalkoodu halkaas loogu yimaado, kuwaas oo walaac ka muujiyay qorshaha cusub.
“Waxaan ka walaac sanahay in dhulkeena la doonayo in laga dhiso dhismayaal dhaadheer, qaab noolaleedkeeni waa uu burburayaa” ayay tiri mid kamid ah dadka ku nool keymaha la doonayo in laga dhigo caasimadda Indonesia.
Keymahaas ayaa waxaa ku nool xayawaan badan oo duur jog ah, waxaana walaaca ugu weyn uu yahay halka ay ku dambeyn doonaan xayawankaas oo laga cabsi qabo inay suulaan, Inkastoo dowladda dalkaas ay sheegtay inay ilaalin doonta keymaha iyo duur joogta ku nool.
Magaalada Jakarta ayaa waxaa ku nool tobanaan milyan oo qof, kuwaas oo deris la noqday biyaha badda ee ka sare maraya jilbahooda, mustaqbalkana laga cabsi qabo inay qariyaan gebi ahaan dhismayaasha caasimadda.
Dad badan oo halkaas ku nool waxay shegeen in aysan heysanin meel kale oo ay ku noolaadaan, waxaana ay dalbanayaan in dowladda wax ka qabato khatarta ay wajaheyso caasimadda.
Somaliland iyo Midowga Yurub oo gaaray heshiis ku kacaya 7 milyan oo dollar